Izindaba - I-Chinese Spring Festival iseduze kakhulu, uJohan noJason bandizela lapha bevela e-Australia
I-Chinese Spring Festival iseduze kakhulu, uJohan noJason bandiza lapha bevela e-Australia. Kusehlobo e-Australia manje, bagqoka isikibha esifushane semikhono ngaphakathi kwejazi labo elijiyile. basilethela isipho esifudumele kakhulu, kuwumsebenzi omkhulu!
Ezinsukwini ezintathu ezimatasa bahlala lapha, sixoxe ngokuningiliziwe mayelana nephrojekthi enkulu, unjiniyela wethu wethula inqubo yethu yokushisela nokuchofoza, wakhombisa abahlinzeki bethu abahlobene nemishini kubandakanya nomshini wethu omusha owakhiwe kabusha wale phrojekthi, waveza inqubo esemqoka nemingcele esemqoka . Ukuqonda kwethu kahle iphrojekthi kwenza iklayenti lethu likhululeke futhi lineliseke. Ingxoxo ibushelelezi kakhulu, ingeyemayini enkulu e-Australia, sizokwenza izigubhu eziningi kazibuthe ukushintsha lezo ezigqokile.
Isigubhu seMagnetic singenye yemikhiqizo ejwayelekile kaStamina, siyasetshenziswa embonini yezimayini, iroli enkulu enezimenethi ezinamandla kakhulu kuyo, kunzima kakhulu futhi kuyingozi ukuhlanganisa odonsa, ngenhlanhla sinolwazi oluningi kuyo. Inqubo yethu ye-welding nemishini ivuthwe kakhulu, umsebenzi wethu womhlangano onamandla amakhulu angaphezu kuka-2000 usebenza kahle kakhulu futhi usezingeni eliphezulu.
Inkontileka yasayinwa kusasele usuku olulodwa ngaphambi kosuku lomkhosi wasentwasahlobo waseChina, zombili izinhlaka zazithokozile futhi zithokozile, yonke imibuzo yaxazululwa nayo yonke inkinga yezobuchwepheshe yanqotshwa. UJohan noJason bayasithemba, uStamina ubanikeze izinhlobo eziningi zemikhiqizo kubo iminyaka eminingi, ngezindleko eziphansi nekhwalithi ephezulu. Bakholelwa ukuthi uStamina uzowenzela umsebenzi omuhle lo msebenzi, yize unzima impela.
Unyaka wezi-2020 ubonakala ungunyaka okhethekile kithina, abasebenzi bethu baqale iholide lethu lomkhosi wasentwasahlobo kusukela ngosuku olwandulela unyaka omusha, sekuhlwile impela, kepha sonke sigcwele injabulo nethemba. Noma kunjalo, kuyisiqalo esihle kakhulu.